မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XXVI | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XXVI
မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XXVI
၂၀၁၄ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်
ဆီနိတ်လွှတ်တော်အမတ် Leahy က အမေရိကန် Vermont ဗာမွန့်ပြည်နယ်ကိုကိုယ်စားပြုပါတယ်၊
ယင်းပြည်နယ်ကသန့်လဲသန့် သက်လဲသက်သာတဲ့ရေအားလျှပ်စစ်ကိုအရမ်းကို အမှီသဟဲပြုရပါတယ်
ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေက မိမိတို့ရဲ့သံယံဇာတ ကိုအသုံးပြုပြီး ရအားလျှပ်စစ် ပျိုးထောင်နိုင်
ဘို့အခွင့်အလမ်း မ ရနိုင်အောင် လွှတ်တော်အမတ် Leahy က ဘတ်ဂျက် ဥပဒေကြမ်းကို မကြာခင်
ဟားဗာဒ် Harvard တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခ John Briscoe က ဒီကိစ္စကိုသူ့ရဲ့ blog ဘာ လုဒ်မှာ ဆွးနွေးထားတယ်
မိသားစုသုံးလျှပ်စစ်နဲ့ နိုင်ငံသုံး ရေအားလျှပ်စစ်ပမာဏ
အမေရိကန်မိသားစုရဲ့ရေခဲသေတ္တာ ကသုံးတဲ့ လျှပ်စစ်ဟာ
Ehtiopian တဦးသုံး လျှပ်စစ်ရဲ့ ၁ဝ ဆ ရှိတယ်
ချမ်းသာနိုင်ငံက လျှပ်စစ် သံယံဇာတ မှ ၈ဝ % ကိုဖော်သုံးတယ်၊
အာဖရိက က ၅ % ဘဲ ဖော်သုံးနိုင်တယ်
(မြန်မာပြည်ကအချိုသောသူတွေလို သူဌေးသားဂိုက် မ ထုတ်ပါ)
အမတ်Leahy က အဆင့်မြင့်ဘတ်ဂျက်ငွေသုံးစွဲရေးကော်မတီဝင်ပါ၊
မူဝါဒ တွေကိုအမေရိကန်အစိုးရပေါ်လစီ ကဆန့်ကျင်တဲ့အလျောက်
ကျနော်က South Africa ကပါ Mozambique, Bangladesh, India, Brazil နိုင်ငံမျိုးစုံမှာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကို အနှစ် ၄ဝ လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်
ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံကနိုင်ငံရေးသမားတွေ (၎င်းတို့ရဲ့) NGO တွေက သူတို့ကိုယ်တိုင်
မ လျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်း မ လျှောက်လိုတဲ့လမ်းကို ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေကိုလျှောက်ခိုင်းတယ်
အမတ်ရဲ့ Vermont ကျတော့ ဒီလိုမဟုတ်ပါ၊ လျှပ်စစ်ထုတ် ရေကာတာ ၈၄ လုံး ရှိပြီး
ကနေဒါQuebec ပြည်နယ် ကလဲ ရေအားလျှပ်စစ်တော်တော်များများရယူလိုက်သေးတယ်
ကမ႓ာ့ဘဏ်မှာ အဆင့်မြင့် ရေဘက်ဆိုင်ရာအကြံပေးအရာရှိ အဖြစ် ၁ဝ နှစ်
တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် မျှတအောင် (တဘက်စောင်းနင်းမဖြစ်အောင်)
ကိုယ့်ပြည်နယ်ကိုဘဲဂရုစိုက် Africa ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုဂရုမစိုက်
Africa နိုင်ငံတွေက တရုပ်၊Brazil BRICS ဘဏ် ကို ဘဲခေါင်းလှည့်နေကြပြီ
(မြန်မာက ဗာမွန့်ထက် ၂ရ ဆ ကြီးသော်လဲဘဲ ဗာမွန့်ကရေကာကြီး ၈၄ လုံး
ဆိုတော့ ဆရာဦးထွန်းလွင်တို့က ရေကာတာ ရ လုံး အားးလုံးရပ် ဆိုတာကို အမတ် လီဟိုင်
Obama ရဲ့ Power Africa အရကမ႓ာ့ဘဏ်က Congo ကို ရကာတာ ၃ လုံးအတွက် $ ၇၃ သန်း ငွချေးမယ်
It cannot be said that Senator Leahy has the whole of US Congress’ support. Earlier in the year the Electrify Africa Act was approved with the bill specifically stating that the US encourages private sector and international support for the construction of hydroelectric dams in sub-Saharan Africa: as long as the dams are in the US’ national security interests and built following international best practice for environmental and social safeguards.
Then on 20 March the World Bank approvedaUS$73M grant to the Democratic Republic of Congo for the Inga3hydropower project. Commentators say that such highly complex projects need the support of multi-lateral development banks but thatalack of clear US policy is proving to be detrimental to the country’s development interests.
International Rivers တို့လို NGO တွေကဘာကြောင့်အော်ရတယ်ကိုနဲနဲနားလည်လာတယ်
John Briscoe က Stockholm Water Prize ရေဘက်ဆိုင်ရာ နိုဘဲဆုကိုဆွတ်ခူးခဲ့တယ်၊သူမတူအောင်ကမ႓ာနဲ့ဒေသဆိုင်ရာရေထိန်းသိမ်းမှုတွေကို